Iyo yekuvhundutsa inopinza yakagadzirwa naMax Auto , zvinosanganisira mhando yemafuta uye gasi rudzi, twintube uye mono chubhu, yakatengeswa zvakanyanya pasi rese, inosanganisira USA, EUROPE, Africa, Mid-East, South Asia neSouth America.
Nheyo yekushanda kweiyo nzira mbiri mbiya inovhundutsa inopinzainotsanangura: Paunenge uchimanikidza kufamba, gumbo remotokari rinoswedera pedyo nemuviri, chigadziro chinoputika chinomanikidzwa, panguva iyo piston mukati memushonga wekuvhundutsa inofamba pasi. Iro vhoriyamu yekamuri yepasi yepiston inoderedzwa, kudzvanywa kwemafuta kunowedzera, uye mvura inoyerera kuburikidza nevhavha yekutenderera kuenda kukamuri (yepamusoro mhango) pamusoro pepiston. Iyo yekumusoro mhango inogarwa nepiston tsvimbo chikamu chenzvimbo, saka huwandu hwepamusoro mhango kuwedzera ishoma pane huwandu hwekudzikisira kwegomba rezasi, chikamu chemvura chinobva chasundidzirwa yakavhurika compression valve, inoyerera ichidzokera kunzvimbo yekuchengetera. humburumbira.
Aya mavharuvhu anogadzira masimba ekunyorovesa ekumanikidza kufamba kwekumiswa kuchengetedza mafuta. Kana iyo yekuvhundutsa ikawedzera kurova, mavhiri akaenzana nekuve kure nemuviri, uye iyo yekuvhunduka inotambanudzwa. Iyo piston yeshock absorber inobva yaenda kumusoro. Kutsikirira kwemafuta mugomba repamusoro pepiston kunosimudzwa, vharuvhu yekutenderera yakavharwa, uye mvura iri mugomba repamusoro inosundira vharafu yekuwedzera mugomba rezasi. Nekuda kwekuvapo kwepiston tsvimbo, iyo mvura inoyerera ichibva kugomba repamusoro haina kukwana kuzadza huwandu hwekuwedzera kwegomba rezasi, iyo huru yepasi mhango inoburitsa vacuum, apo mafuta ari mudura anosundira vharafu yekubhadhara 7. iyo yepasi mhango yekuwedzera. Nekuda kweiyo throttle yeaya mavharuvhu, iyo kumiswa kunoshanda seyakanyorovesa mhedzisiro kana uchitambanudza kufamba.
Nekuda kwekuti kuoma uye simba rekunyepedzera kwechitubu chevharuvhu rakagadzirwa kuti rive rakakura kupfuura vharafu yekumanikidza, pasi pekumanikidza kwakafanana, nzvimbo yekuremedza chiteshi chevhavhavha yekuwedzera uye inowirirana yakajairika pass gap ishoma pane huwandu hwevhavha yekumanikidza uye. iyo inoenderana yakajairika pass gap chiteshi chekucheka-nzvimbo. Izvi zvinoita kuti simba rekunyorovesa rinogadzirwa nekufamba kwakawedzera kwekukatyamadza kukuru kupfuura simba rekunyorovesa rekumanikidza sitiroko, iyo inosangana nezvinodiwa zvekukasira kubatwa.